Date My Pet » 6 Manan-danja Fanontaniana mila eritreretinao talohan'ny asitrika ao amin'ny Dating Pool
amin'ny Jennifer Brown Banks
Last nohavaozina: Nov. 27 2020 | 3 min namaky
Sary an-tsaina ny mandeha any amin'ny mpivarotra ho fahazarana fiantsenana lavitra. Ianao tsy mety ho avy ny lisitry ny zavatra tokony, ny teti-bola, na misakafo hevitra.
Ny karazany ny safidy no saina hafakely. Tsy mahalala ny toerana hitadiavana voalohany. Tsy manana rafitra ... .no fomba ny fahaverezan-tsaina mampidi.
Matokia fa mandany fotoana ianao, manadino ny haka ny sasany tena ilaina "tahiry ny" entana, mandany vola, ary farany ny fanaovana ny faharoa nandeha teo anoloan'ny volana dia ny.
Ny fahatsapana toy izany koa korontana sy ny fisafotofotoana manjaka rehefa izahay ao amin'ny "tsena" ho an'ny vady.
Maro amintsika no tsy tena heviny ny zavatra tadiavinao, izay hijery, na ny fomba tonga amin'ny fanaovana safidy baovao.
Fa, tsy voatery ho toy izany.
Araka ny voalaza Socrates indray mandeha amim-pahendrena: "Ny unexamined ny fiainana dia tsy mendrika ny hiainana."
Miaraka ho toy ny tondrozotra, eto dia 6 fanontaniana lehibe tokony manontany tena hoe alohan 'ny hanombohan-zava-dehibe rehetra daty voalohany.
1. Inona no tanjona amin'izao fotoana izao mampiaraka? Aho mitady vady ho avy? Tsotsotra hoe mampiaraka? An fifandraisana misokatra? A siramamy Dada a!? Ny mazava kokoa ianao, ny tsara ianao afaka miteny imailaka amin ny mety ho mpiara-miasa, ary ny tarehy dia ho azy ireo. Na dia tsy hanazavana izany ho azy ireo, dia afaka manampy ny hamonjy ny fotoana sy ny korontana eo amin'ny dingana fitiliana voalohany. Eritrereto tetika!
2. Inona no fifanarahana onja? Raha lazaina amin'ny fomba hafa, Inona no toetra, fahazarana, na ny fomba fiainana olana ianao vonona ny hanaiky lembenana. Ohatra, ny olona sasany dia tsy hampiaraka amin'ny ankizy ny vehivavy. Ny vehivavy sasany dia tsy hampiaraka ny mpanao heloka bevava ry zalahy amin'ny firaketana. Ary ny olon-kafa, taona mety ho toe-javatra eo amin'ny ankapobeny mira. Na dia zava-dehibe ny marimaritra iraisana mahomby rehetra fifandraisana, tsy tokony hampandefitra ny soatoavina fototry na ny fototry ny hoe iza moa isika, havitrana fotsiny ny amin'ny cutie.
3. Inona no ianarako avy ny farany fifandraisana? Misy fahamarinana lehibe ny teny, "Ireo izay tsy mba hianatra avy amin'ny lasa tsy maintsy ho hamerina izany." Angamba eo amin'ny hindsight anao izao manaiky fa "jiolahim-boto" tsy ny zavatra. Na fa mila mifandray tsara kokoa ny zavatra ilaina. Lesona mitovy isaky ny fitiavana "ny mpianatra." Ny tena tanjona dia ny hamantarana misy manimba na disserving mampiaraka ny zavatra tokony halavirina famerimberenana. Mahazo ny hevitra eto?
4. Dia ny fikarohana fehezin'ny azo fanantenana? Ny fananana ny fanasan-damba lisitry ny ambony dia tiany sy ho maro ihany no mahafoana ny dingana. Ohatra, vehivavy sasany hiandrandrantsika ny mahita vady izay enina metatra ny haavony, fanaovana enina tarehimarika, izay tsy mbola manambady, miteny 3 fiteny, ary tia ny biby fiompy. Mety hitranga ve izany? Antoka.
Azo inoana fa? About araka ahy ny olo-malaza manambady hanorotoro, Keanu Reeves. Get ny tsipiriany.
5. Izany ve no fotoana tsara indrindra mba hahazoana ny tongotro lena? Mitady aho Hiverina mba hanoloana ny fifandraisana teo aloha? Ve aho manana ny fotoanany sy ny heriny mba hanokana ny ho mpiara-miasa ao amin'ny fifandraisana? No sitrana tamin'ny ratra taloha? Ireo no zava-dehibe mba handinika. Ary fantatrareo ihany ny tena fifanarahana.
6. Moa aho drafitra lalao? No sonia an-tserasera ho fanompoana mampiaraka? Angataho ny namako mba manamboatra ahy? No fitafiana "daty vonona?"Ve aho no mila nihena? No mampiaraka indroa isan-kerinandro, na indroa isam-bolana? Toy ny tanjona lehibe, drafitra kilalao tokony ho eo amin'ny toerana mba ho toy ny kompà, antsika manolo-tena, ka tandremo antsika amin'ny lalana.
"Ho anao ho tena marina." Raha te hampitombo ny mifanohitra ny fitadiavana ny marina sy ny mamorona vady mifanentana kokoa ny fifandraisana, hahafantatra ny tenanao aloha.
Fa ny fitiavana ny iray Pet
6 Tips To Sarotra ny vanin-taona mafana Solo!
7 Freaky Antony Online Dating Afaka mitady Voaroaka
10 Antony Nahoana Cats no ambony noho ny sipa
Nahoana Isika no Tokony Hampiaraka ny Girl Tamin'ny Dog